Global Voices teny Malagasy » Fotoana izao hanesorana an’i Sodàna tsy ho anatin’ny lisitr’i Etazonia manondro ireo firenena mpampihorohoro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Septambra 2020 15:09 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed Suliman Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Etazonia, Sodàna, Ady & Fifandirana, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Mpinamana nihaona tao Khartoum, renivohitr'i Sodàna. Sary tao amin'ny Pikist , tahirintsary azo ampiasaina malalaka.
Tamin'ny Aprily 2019, nesorin'ny vahoaka sodaney ny fitondràna miaramila tao aminy, izay nifehy ny firenena nandritra ny 30 taona . Anisan'ireo lova ratsy marobe navelany, tsy maintsy nozakain'ny firenena ny nampidiran'i Etazonia azy ho ao anatin'ny lisitr'ireo firenena mpanohana ny asa fampihorohoroana (SST) .
Tamin'ny Aogositra 1993, nampidirina ho anatin'ny lisitr'ireo firenena mpanohana ny asa fampihorohoroana i Sodàna, noho ny fiheverana hoe ny fitondràna tao Sodàna tamin'izany fotoana izany, teo ambany fitarihan'i Omar al-Bashir, dia “nanohana ireo vondrona mpanao asa fampihorohoroana erantany , isan'izany ny Fikambanana Abu Nidal, ny Jihady Islamika Palestiniàna, ny Hamas, ary ny Hezbolà. ”Hita tao anatin’ireo sazy  nanaraka an'io fanoratana azy tanaty lisitra io ireo faneriterena mahakasika ny tohana avy any ivelany omen'ny amerikàna, ny teritery ara-bola, ary ny fandraràna ny fifampivarotana fitaovam-piarovana afarana avy any ivelany. Nisy ihany koa ireo sazy izay nahazo ireo firenena hafa miditra anaty fifampiraharahàna hifanerasera ara-barotra amin'ireo firenena voalaza fa fanjakàna manohana ny asa fampihorohoroana.
Ny governemanta tetezamita tarihan'ny sivily ao Sodàna dia manamafy fa tsy misy ao Sodàna amin'izao andro ankehitriny izao ireny fikambanana mpanao asa fampihorohoroana ireny. Nandritra ny kabariny tamin'ny Septambra 2019 nanoloana ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana, nohamafisin'i Abdalla Hamdok, praiminisitra ao Sodàna, fa hetsiky ny fitondràna nesorina teo aloha izany . Kanefa, mbola mijanona ao anatin'ny lisitra SST hatrany i Sodàna, ary tena misy fiantraikany tokoa  io amin'ny resaka fanasaziana ny governemanta, indrindra fa amin'ny fanerena ny governemanta amerikàna handà ireo fampindramambola ataon'ny Banky Iraisampirenena sy ireo fikambanana hafa mpamatsy vola iraisampirenena. Tafiditra anatin'ireo sazy ihany koa ny teritery momba ny fahazoandalana omena ireo handranto fianarana. 
Tamin'ny Aogositra lasa teo, nahavita fifanarahana  iray niarahany tamin'ny fitantanan'i Trump ny governemanta sodaney, tamin'ny fametrahana vola tao amin'ny kaonty iray, mitentina 335 tapitrisa dolara amerikàna, ho an'ireo fianakaviana niharam-pahavoazana tamin'ireo fanafihana niharo asa fampihorohoroana izay nandraisan'ny fitondràna teo aloha anjara tamin'ny fanohanana azy nandritra ny taompolo roa lasa. Ao anatin'ireo fanafihana voakasik'io fifanarahana io ny fanafihana tamin'ny baomba nahazo ny masoivoho amerikàna tany Kenya sy Tanzania tamin'ny 1998 ary ny fanafihana ny USS Cole tamin'ny taona 2000.” Io fifanarahana io dia notohanan'i Edith L. Bartley , mpitondratenin'ireo fianakavian'ny Amerikàna maty tamin'ny fanafihana tamin'ny baomba.
Mety hitsingilahila ihany anefa ireny ezaka ireny noho ny filazàn'ireo fianakaviana sasany tamin'ireo niharam-pahavoazana tamin'ireo fanafihana 11 Sept  hoe nandray anjara tamin'ireny fanafihana niharo asa fampihorohoroana ireny i Sodàna. Tamin'ity taona ity, tao anatin'ny fankalazana ny fahatsiarovana ireny fanafihana ireny , namoaka fanambaràna iray ny loholona amerikàna Bob Menendez nanoritsoritany ny fifampiraharahàna nisy teo amin'ny governemanta sodaney sy amerikàna ho toy ny “felaka tehamaina teny amin'ny tavan'ireo  niharam-pahavoazana tamin'ireo fanafihana tamin'ny 11 Septambra sy ireo fianakavian'izy ireny” ary nilaza fa holaviny izay rehetra tolodalàna” tsy manisy fanajàna mendrika azy ireo sy mijery amim-pahamendrehana an'ireo niharam-pahavoazana tamin'ny 11/9 sy ireo fianakaviana.”
Mazava loatra fa tsy misy mitombina ireny fiampangàna ireny. Noureldin Sati, masoivoho sodaney ao Etazonia, dia nandà tanteraka ireny fanambaràna ireny, ary nanisy tsindrimpeo hoe tsy nisy na iray aza fitsaràna nanamafy azy ireny . Ny tena zavadehibe dia nomarihan'ny tatitry ny kaomisiôna mahaleo tena momba ny raharaha 9/11  fa “… tsy misy fananan'i Bin Laden ho loharanombolan'ny Al Qaeda ao Sodàna.” Nohamafisin'ilay tatitra ihany koa hoe “ rehefa noterena hiala tao Sodàna i Bin Ladeb tamin'ny 1996, nalain'ny governemanta Sodaney ny fananany ary nogiazany ny kaontim-bolany, araka izany dia azo lazaina ho nandao an'i Sodàna tamin'ny tànam-polo izy.”
Ny ankamaroan'ireo Amerikàna mpanao lalàna, avy amin'ny ankolafy roa, dia samy mankasitraka ny fanohizana ilay fifanarahana, saingy misy loholona roa manohitra azy io  noho ny antony naroso etsy ambony. Vao haingana anefa, ny sekreteram-panjakana amerikàna, Mike Pompeo, nandefa taratasy ho fanohanana ny fampandaniana ilay lalàna momba ny tsimatimanota . Ao anatin'izany, nilaza izy fa ilay fifanarahana dia “iray tsy miverina ao anatin'ny andian-taranaka iray” mba hahazoana fanonerana ho an'ireo marobe niharam-pahavoazana tamin'ireny fanafihana niharo asa fampihorohoroana ireny, ary hatramin'ny fanomezana tohana ho an'ny demaokrasia vao miana-mandeha ao Sodàna, taorian'ny nanilihany samy irery ny fitondrana jadona Al-Bashir.
Cameron Hudson, zokiolona mpikaroka ao amin'ny Filankevitry Atlantika ao amin'ny Ivontoerana Afrika, sady lehibe fahiny tao amin'ny kabinetran'ny iraka manokan'i Etazonia tao Sodàna, dia nanoratra lahatsoratra iray milaza fa tokony hiasa hanaisotra izay mety ho sakantsakana ny ao amin'ny kaongresy amerikàna .
David L. Phillips, zokiolona mpanolotsaina ary manampahaizana manokana momba ny raharaha ivelany ao amin'ny departemantam-panjakana amerikàna sady talen'ny fandaharanasa momba ny fandrafetana fandriampahalemana sy ny zo, ao amin'ny Ivontoerana Fianarana momba ny Zon'Olombelona ao amin'ny anjerimanontolon'i Kôlômbià, toerana niarahany nitantana ny tetikasa Sodàna Roa , dia vao haingana no namoaka lahatsoratra iray nanohanany ilay fifampiraharahàna. Nilaza izy fa hitondra tombontsoa ho an'ny toekarena amerikàna ny fanesorana an'i Sodàna tsy ho ao anatin'ilay lisitra satria Sodàna dia “manankarena amin'ny solika ; hita ao ihany koa ny dity arabica  izay otazana avy amin'ny hazo Acacia, ataon'ireo vehivavy mivondrona anaty kaoperativa ao Darfur . Ny fanitarana ny famokarana dity arabica, ampiasaina betsaka amin'ny fikarakarana sakafo sy vokatra fikarakaràna hatsaran-tarehy, dia mety ho màna ho an'ireo orinasa toy ny Coca-Cola, Chobani sy ny Estee Lauder, izay mila famatsiana azo antoka sy tsara kalitao amin'ny dity arabica.”
Tsy ela akory izay, naka ny media sôsialy ireo Sodaney ao Etazonia, nandefa hafatra ho an'ireo loholona manohitra ilay fifampiraharahàna , ary nitaky ny hanesorana an'i Sodàna tsy ho ao anatin'ny lisitra SST (Firenena manohana ny asa fampihorohoroana), ny sasany nitaky ny hampitsaharan'i Schumer sy Menendez ny famadihana ilay raharaha ho resaka pôlitika.
Mandritra izany fotoana izany, amin'izao fotoana izao i Sodàna dia miatrika olana goavana tsy mbola nisy toy izany, indrindra fa ny tangolika (spirale) ara-toekarena sy ireo tondradrano goavana. Tany ampiandohan'ny Septambra, nambaran'ny governemanta amperinasa ny fisian'ny hamehana ara-toekarena  taorian'ny fitontonganana be teo amin'ny sandambola, niaraka tamin'ny fihenana tonga hatrany amin'ny 143.78 isanjato tamin'ny Jolay. Ireny toedraharaha henjana nolalovan'ny toekarena ireny dia mitovitovy amin'ny vanimpotoana farany niainan'ny fitondràn'i Al-Bashir ary tena loza mitatao ho an'ny vanimpotoana tetezamita manontolo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/27/149886/
 nifehy ny firenena nandritra ny 30 taona: https://en.wikipedia.org/wiki/Sudanese_Revolution
 lisitr'ireo firenena mpanohana ny asa fampihorohoroana (SST): https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
 “nanohana ireo vondrona mpanao asa fampihorohoroana erantany: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/sudan/#:~:text=The%20Secretary%20of%20State%20designated,Jihad%2C%20Hamas%2C%20and%20Hizballah.&text=Sudan%20has%20taken%20steps%20to%20work%20with%20the%20United%20States%20on%20counterterrorism.
 hetsiky ny fitondràna nesorina teo aloha izany: http://statements.unmeetings.org/GA74/SD_EN.pdf
 tena misy fiantraikany tokoa: https://2001-2009.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/82736.htm
 teritery momba ny fahazoandalana omena ireo handranto fianarana.: https://www.dhs.gov/news/2020/09/24/dhs-proposes-change-admission-period-structure-f-j-and-i-nonimmigrants
 fanafihana tamin'ny baomba nahazo ny masoivoho amerikàna tany Kenya sy Tanzania tamin'ny 1998 : https://en.wikipedia.org/wiki/1998_United_States_embassy_bombings
 USS Cole : https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Cole_bombing
 fanafihana 11 Sept: https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
 felaka tehamaina teny amin'ny tavan'ireo: https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/menendez-we-must-do-right-by-9/11-families-as-they-seek-justice
 tsy nisy na iray aza fitsaràna nanamafy azy ireny: https://www.usatoday.com/story/news/world/2020/09/11/9-11-families-push-back-deal-take-sudan-off-terror-list/5679461002/
 kaomisiôna mahaleo tena momba ny raharaha 9/11: https://govinfo.library.unt.edu/911/staff_statements/911_TerrFin_Monograph.pdf
 misy loholona roa manohitra azy io: https://www.wsj.com/articles/sudan-deal-to-settle-embassy-bombing-claims-being-blocked-by-schumer-menendez-11600022016
 nandefa taratasy ho fanohanana ny fampandaniana ilay lalàna momba ny tsimatimanota: https://foreignpolicy.com/2020/09/18/pompeo-trump-seeks-sudan-terrorist-sponson-list-deal-before-trump-election-africa-congress/
 tokony hiasa hanaisotra izay mety ho sakantsakana ny ao amin'ny kaongresy amerikàna: https://foreignpolicy.com/2020/09/25/for-sudan-a-deal-with-israel-could-pave-the-way-to-economic-recovery/
 Sodàna Roa: https://sudantribune.com/spip.php?article49862
 manankarena amin'ny solika: https://www.eia.gov/international/analysis/country/SDN
 dity arabica: https://www.theguardian.com/global-development/gallery/2013/apr/01/harvesting-gum-arabic-sudan-in-pictures
 vehivavy mivondrona anaty kaoperativa ao Darfur: https://reliefweb.int/report/sudan/empowering-rural-women-gum-arabic-project-sudan
 nandefa hafatra ho an'ireo loholona manohitra ilay fifampiraharahàna: https://twitter.com/jalelahsophia
 hamehana ara-toekarena: https://www.reuters.com/article/sudan-economy/update-1-sudan-declares-state-of-economic-emergency-due-to-fall-of-currency-idUSL8N2G769W